Malunga nathi - Shanghai Zhanzhi Industry Group Co., Ltd.
Inkampani iShanghai Zhanzhi Industry Group Co., Ltd., Eyasekwa ekuqaleni kweminyaka yee-1980, ebekwe kwiSithili saseYangpu eShanghai, liqela elikhulu lamashishini amakhulu, elidibanisa urhwebo lwentsimbi, ukuqhubekeka kunye nokusasazwa kwensimbi, izinto zentsimbi ekrwada, uphuhliso lwezindlu, utyalo mali kunye namanye amashishini. Imali eyinkunzi ebhalisiweyo yi-200 yezigidi zeRMB.
Njenge China izinto zeshishini kwishishini elikhokelayo amashishini, urhwebo lwentsimbi kunye nolungiselelo lweshishini lesizwe "Amakhulu amashishini okholo olungileyo", amashishini orhwebo e-China, "Amashishini abucala ayi-100 aphezulu eShanghai" .Iqela laseShayina iZhanzhi Group Co., Ltd., ) ithatha "ukuthembeka, ukuSebenza, ukuYila, ukuPhumelela-njengoMgaqo-nkqubo wayo ekuphela kwayo, ihlala ibeka ukubeka iimfuno zabathengi kwindawo yokuqala. Ukuhlangabezana nezona mfuno ziphezulu zabathengi njengendawo yokuqala kunye nendawo yomsebenzi, iphumelele intembeko kunye nentlonipho yabathengi abaninzi kwaye iphumelele imeko yokuphumelela kunye nabathengi, yaseka indawo ekhokelayo kushishino lwentsimbi. Umntla we China, umbindi we China, kunye ne mpuma ye China indawo.Iqela le-Zhanzhi e-Guangdong, e-Fuzhou, e-Xiamen, e-Chengdu, e-Chongqing, e-Shanxi, e-Tianjin, e-Liaoning, e-Lanzhou, e-Wuxi nakwezinye iindawo ezi-13, unabasebenzi abangaphezulu kwe-1000, intengiso yonyaka yeemveliso zentsimbi ezingaphezu kwe-3.5million yeetoni, ingeniso yonyaka yokuthengisa ngaphezulu kwe-15 yezigidi zeRMB.
Okwangoku, inkampani ebandakanyekayo kolu shishino lulandelayo:
1. Urhwebo lwentsimbi. Ummeli weBaosteel, Anshan Steel, Shougang Group, Benxi Steel Group Corporation, Hebei Iron & Steel Group, Jiuquan Iron & Steel Group, Liuzhou Iron and steel Co., Ltd. kunye nezinye iimveliso zasekhaya ezaziwayo-kakuhle lokusila, kuquka iikhoyili zentsimbi, Iintsimbi zentsimbi kwalenza kunye nembasa, ipleyiti yesinyithi, ipleyiti eyomeleleyo, intsimbi, H-beam, I-bean, iintonga zocingo njl Inkonzo kumashishini angamawaka amane anje ngeGree, Midea, Butler, Geely, Volkswagen, XCMG, LONKING, YULONG STEEL Pipe, Himin njalo njalo. Iimveliso zethu inxaxheba koomatshini processing, ubunjineli isakhiwo sentsimbi, ukhuselo lokusingqongileyo, izixhobo izixhobo, ubunjineli amandla ombane, imoto, ukwakha iinqanawa kunye namanye amashishini.
2. Ukulungiswa kunye nokuhanjiswa kwentsimbi. Ukwenzela ukubonelela ngcono ngokuma kokuma kwentsimbi, ukugcinwa, ukuhanjiswa kweenkonzo kubathengi, inkampani iseke indawo yokuhambisa kunye nokusasaza eShanghai, eQuanzhou, ukuhlangabezana neemfuno zamaqela abathengi ahlukeneyo.
3. Izinto zentsimbi kunye nezinto zokubasa. Ukunyuka kweshishini lezinyithi kunye nokwandiswa kwezinto zentsimbi kunye nezinto zeshishini, inkampani yethu iseke izinto ezizinzileyo zentsimbi kunye nesiseko sokuhambisa amafutha.
4. Ukuthengiswa kwezindlu kunye notyalo mali. Ukuphucula ukhuphiswano lwenkampani, ukuphucula ixabiso lebrendi. Inkampani yethu ivelisa indawo yophuhliso olwahlukeneyo kushishino lwentsimbi, ibandakanyeka kuphuhliso lwezindlu nomhlaba, ishishini lotyalo mali. Okwangoku, inkampani inezabelo kumashishini amaninzi ezithengisa izindlu nomhlaba, kwangaxeshanye yenza utyalo-mali kwi-equity kumaqela amakhulu ezemali.
Ukuphonononga okwadlulayo, senze impumelelo ebalaseleyo. Jonga phambili kwikamva, sigcwele ukuzithemba kwimpumelelo. Kuphuhliso lwexesha elizayo, siza kuphucula inkqubo yolawulo lwangaphakathi, sandise ukufunxwa nokulinywa kweetalente, sandise ulwabiwo lwezixhobo, kwaye sikhuthaze ngenkuthalo ukwahluka kwesithuba sophuhliso lweshishini, siguqule ishishini lesinyithi kwishishini lesinyithi kulungiselelo lwentsimbi kunye nentsimbi ishishini lenkonzo, ukuphucula ukhuphiswano olusisiseko lwamashishini.
Kwizicwangciso zophuhliso loshishino lwexesha elizayo, eli qela liza kuqhubeka nokuphucula indlela yolawulo lwangaphakathi, landise ukufunxwa kunye noqeqesho lweetalente, lithathe imizamo emikhulu yokwandisa ulwabiwo lwezixhobo zeshishini, lenze inkqubo yokuthengisa enamandla kwaye ekugqibeleni liphucule amandla okhuphiswano phakathi kwamashishini esinyithi asekhaya . Iqela liza kusebenza kunye namaqabane amadala kunye namatsha ukudala ikamva elingcono!